Ukwenza uHulumeni wasekhaya usebenze
Ijoka likaHulumeni wasekhaya libalulwe ngokusobala kusigaba 152 soMthethosisekelo. Uhulumeni wasekhaya uphoqelekile ukuthi ubonisane nemiphakathi futhi ubandakanywe ezinqubweni zokuthathwa kwezinqumo. Amakhansela akhethwa ukuze amele futhi asebenzele umphakathi ukuze kugcwaliseke amalungelo abantu akuMthethosisekelo okuthi bahlinzekwe ngezidingongqangi.
Ukuze kugcwaliseke amalungelo ethu akuMthethosisekelo okuthola izidingongqangi sidinga uhulumeni wasekhaya onomdlandla futhi onesibopho sokuphendula. Sidinga uhulumeni wasekhaya othatha izinqumo ezifanele ezizohlomulisa imiphakathi iyonke. Sidinga uhulumeni wasekhaya odingida okuseqhulwini kumalungelo, noqinisekisa ukuthi kunokubumbana komphakathi kanye nozinzo, futhi osibandakanyayo ekuthathweni kwezinqumo. Kubalulekile ukuthi usukume ukuze kwakheke uhulumeni wasekhaya walolu hlobo. Phoqelela ukuzibandakanya ekubonisaneni nasenqubweni yokuthatha izinqumo futhi uphoqe umasipala wakho ukuthi uphendule!
Bika ngokwahluleka kukahulumeni wesifundazwe noma okazwelonke okuqhubekayo
Uma imizamo yakho yokwenza umasipala uphendule ngokusetshenziswa kwezinsiza zikahulumeni ingaphumeleli futhi ukwazi ukuveza ukuthi umasipala uyehluleka ukuhlinzeka ngezidingongqangi nokugcina izibopho zezimali zawo, kumele lezo zigameko uzibikele umnyango wesifundazwe obhekele ohulumeni basekhaya. Uma uhulumeni wesifundazwe ethola ukuthi umasipala awukwazi ukufeza izibopho zawo ungaphoqelela uhlelo lokulungisa.
ukuhlonza amasu okubhekana nezinkinga zokuphathwa kwezimali ngokuhlonza izinsiza ezidingekayo ukuze kuqaliswe la masu kanye nokuthi lezi zinsiza zingaqhamuka kuphi
ukumisa izikhathi zokuqalisa uhlelo lokulungisa.
Uma umasipala unqaba ukwamukela uhlelo, noma ungeke ukwazi ukuluqalisa, uhulumeni wesifundazwe ungawuhlakaza umkhandlu kamasipala futhi ufake umasipala ngaphansi kweso likahulumeni wesifundazwe kuze kubanjwe ukhetho olulandelayo (isigaba 139(4)(5) soMthethosisekelo; isigaba 136-149 soMthetho wokuPhathwa kweziMali zoMasipala (MFMA) ). Uma lokhu kungaphumeleli ekuletheni uguquko, uhulumeni kazwelonke angangenelela ngokuthi aphathe umasipala kuze kubanjwe ukhetho olulandelayo (isigaba 150 se-MFMA).
Njengelungu lomphakathi unelungelo lokulindela ukuthi uhulumeni abhekele izikhalo zakho.